उपत्यकामा बैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा,के गर्न पाइन्छ के पाइन्न ? - Nepali in Australia
April 26, 2021 autherLeaveaComment on उपत्यकामा बैशाख १६ देखि निषेधाज्ञा,के गर्न पाइन्छ के पाइन्न ?
काठमाडौँ । कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि निषेधाज्ञाको निर्णय भएको छ । काठमाडौका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमवार बिहान बसेको बैठकले कोभिड १९ को दर बढिरहेकाले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिएका हुन् ।
ुप्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गृह सचिवसँगको छलफल पछि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गरेको बताइएको छ । १६ गतेदेखि लागू हुने निषेधाज्ञामा सार्वजनिक यातायात ठप्प हुनेछ। साथै निजी सवारी पनि निषेध गरिने निर्णय भएको छ। मानिसका गतिविधि बाक्लो हुने अन्य क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा लागू हुने छ।
कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले संक्रमितिको सक्रिय सङ्ख्यालाई हेरेर स्थानीय प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिनको लागि सिफारिस गरेको थियो। ठुला शहरहरूमा ५ सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको खण्डमा निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकारको सिफारिस गरेको थियो। काठमाडौं जिल्लामा मात्र आइतबार एक हजार भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका थिए।
आइतवार बसेको सीसीएमसी बैठकले देशभरका विद्यालय तथा शिक्षालयमा भौतिक उपस्थित नभइ भर्चुअल रुपमा पठन–पाठन गर्नरगराउन पनि निर्देशन दिएको छ। संक्रमण बढेसँगै बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। त्यस्तै मकवानपुरमा समेत सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू भइसकेको छ। अत्यावश्यक सेवा भने निषेधाज्ञाका बिच पनि संचालनमा आउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
मास्क नलगाई हिँड्नेलाई राख्न सडकमै बने यस्ता ‘होल्डिङ जोन’
उपत्यकामा थपियो निषेधाज्ञा, राति आठ बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने